မတ်လ 2015 |5၏စာမျက်နှာ 37 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2015 » မတ်လ (စာမျက်နှာ 5)
SMPTE 2015 NAB Show ကိုကို Preview
ရုပ်ရှင်ရုံပေါ် 2015 NAB ပြရန်ရဲ့နည်းပညာထိပ်သီးအစည်းအဝေး (TSC): ဇာတ်လမ်းတွေ၏အနာဂတ်တည်ဆောက်ခြင်း, SMPTE နှင့်အတူပူးပေါင်းထုတ်လုပ် Motion Picture နှင့် 28 NAB ပြရန်, အ 2015 NAB Show မှာ Booth L2015 SMPTE မှာရုပ်မြင်သံကြားအင်ဂျင်နီယာများ (SMPTE) ၏ Society ကသွားရောက်ကြည့်ရှု မနက်ဖြန်၏ရုပ်ရှင်ရုံအတွေ့အကြုံကိုသတ်မှတ်ကြလိမ့်မည်သောနည်းပညာနှင့်တီထွင်ဖန်တီးဆန်းသစ်တီထွင်မှုရှာဖွေစူးစမ်းထံအပ်နှံလိမ့်မည်။ ...
တပ်အားကစားများအတွက် Gearhouse အသံလွှင့်ဗြိတိန်ရွေးချယ် Barnfind
systems တိုင်း signal ကို format နဲ့ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူး Sandefjord, နော်ဝေများအတွက်ဖိုင်ဘာပလက်ဖောင်းဖြန့်ချထား - Gearhouse အသံလွှင့်တစ်ဦးပစ္စည်းကိရိယာများရောင်းအားနှင့်ငှားရမ်းမှုအတွက်အထူးပြုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းပြင်ပရှိထုတ်လွှင့်, စီမံကိန်းကိုဖြေရှင်းနည်းများနှင့်စနစ်များပေါင်းစည်းမှုတစ်ခုအားဖြင့်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တပ်အားကစားဖြစ်ရပ်များ၏လွှမ်းခြုံများအတွက် Barnfind ရဲ့ 1RU ပလက်ဖောင်းကိုရွေးချယ်ထားပါတယ် ဗြိတိန်အတွက်အဓိကဂြိုဟ်တုရုပ်သံဌာန။ Gearhouse အသံလွှင့်ရဲ့ဗြိတိန်ရုံးများစနစ်များအထူးကုများအတွက် Barnfind ပုတ် ...
အားလုံး Archimedia 2.0K / UHD ပစ္စည်းများအတွက် HDMI4Now ကိုစံ
DELRAY သောင်ပြင်, Fla - ။ မတ်လ 26, 2015 - Archimedia, အဘယ်သူ၏နည်းပညာပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရဲ့ desktop ပေါ်မှာမှတိကျသောမီဒီယာထောက်လှမ်းရေးဆောင်တတ်၏ကုမ္ပဏီ, တီဗီ, UHDTV နှင့် SDI အခြေခံအဆောက်အအုံ, ယနေ့ HDMI 2.0 လက်ငင်းယခု Atlas 4K / UHD တစ် standard feature အဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် နှင့် Atlas လွန်ကဲအပေါင်းတို့နှင့်အနာဂတ် 4K / UHD နှင့်ပြင်းထန်သောကရိယာတွင်ထည့်သွင်းပါလိမ့်မည်။ အားလုံးမှ Now အားလုံးမီဒီယာပညာရှင်များ ...
ChyronHego မြင်ကွင်းကျယ် high-definition ဗီဒီယို Display ကို VistaCam ကြေညာ
In-Studio ကအားကစားအစီအစဉ်များများအတွက်အထူးဒီဇိုင်း, နယူးဖြေရှင်းချက် ultra-high resolution MELVILLE, နယူးယော့အတွက်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်, 180-ဘွဲ့နောက်ခံဖန်တီးလိုက်တဲ့ - မတ်လ 26, 2015 - ChyronHego ယနေ့ VistaCam အတွက်မြင်ကွင်းကျယ်တစ်ခု All-သစ်ကိုထုတ်လွှင့်ဂရပ်ဖစ်ဖြေရှင်းချက်များပစ်လွှတ်ထုတ်ပြန်ကြေညာ -studio ကဗီဒီယိုပြသမှု။ VistaCam In-စတူဒီယိုပြပွဲများအတွက်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်, Ultra-high-resolution "ဗွီဒီယိုကိုမြို့ရိုးအ" နောက်ခံပေးစွမ်းသည်။ အဆိုပါ 2015 NAB Show မှာ, ChyronHego အပေါ် VistaCam မီးမောင်းထိုးပြပါလိမ့်မယ် ...
NAB 2015 တစ် Fiber Channel ကို SAN လိုပဲလုပ်ဆောင်သော NAS ပစ္စည်းကိရိယာမှာ BrightDrive AstellaNx Pro ကိုမိတ်ဆက်ပေးဖို့တောက်ပ Technologies က!
NAB Booth SL 16007 Reno, နီဗားဒါး - တောက်ပ Technologies က low-အောင်းနေချိန်က high-performance ကိုကွန်ယက်ကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာများအတွက်အဆင့်မြင့်နည်းပညာဆော့ဖ်ဝဲရေးသူ, Pro ကို BrightDrive AstellaNx, NAB 2015 မှာ Fiber Channel ကို SAN ကဲ့သို့လုပ်ဆောင်တဲ့ကျစ်လစ်သိပ်သည်း NAS ပစ္စည်းမိတ်ဆက်စီစဉ်ကြေညာခဲ့သည်။ အဆိုပါသဲဖြေရှင်းချက် Entry-level ကိုနှစ်ဦးစလုံးဖွနဲ့အသုံးချဖို့တစ်ဦးတွင်တစ်ပြိုင်တည်း high-resolution ကို real-time လုပ်ငန်းအသွားအလာအကောင်အထည်ဖော်ရန် Post-ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ထုတ်လွှင့်စက်ရုံများထူထောင် ...
ယောသပ်သည်အီလက်ထရောနစ် Box ကို Fiber Breakouts Kick ကြေညာ
နိုင်းမြစ်, မကျန်းမမာ - ။ မတ်လ 25, 2015 - ယောသပ်သည်အီလက်ထရောနစ် (Je), အထုတ်လွှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်ဖိုင်ဘာရပ်စဲခြင်းနှင့်ထုံးစံဖိုင်ဘာဖြေရှင်းချက်၏ပံ့ပိုးပေးဘို့ဝန်ကြီးချုပ်တစ်နေရာတည်းမှာဆိုင်, ယနေ့ Kick Box ကို, ဖိုင်ဘာများအတွက်ရိုးရှင်းသော Interconnection ဖြေရှင်းချက်များပစ်လွှတ်ထုတ်ပြန်ကြေညာ စတူဒီယိုထဲမှာလယ်ပြင်၌အသုံးပြုသော, ဒါမှမဟုတ်ဘယ်နေရာမှာမဆိုကင်မရာသမားတွေဖိုင်ဘာဆက်သွယ်မှုကိုဖန်တီးရန်လိုအပ်နိုင်ပါသည် breakouts ...
Zylight ပြိုင်ပွဲတွင်နယူးတွင်-ကင်မရာအလင်းနှင့် ပတ်သက်. 'ဆိုတဲ့ Newz ပျံ့နှံ့' ဖို့ NAB 2015 တက်ရောက်အားပေး
Los Angeles - ၎င်း၏ Newz On-ကင်မရာအလင်း၏အမေရိကန်ပွဲဦးထွက်ဆင်နွှဲရန်, ပရီမီယံ LED အလင်းရောင်ထုတ်လုပ်သူ Zylight Las Vegas မှာ, Nev အတွက် 2015 NAB Show မှာတက်ရောက်အားပေးအားမြှောက်သည်တွစ်တာမှတဆင့် "ဟုအဆိုပါ Newz ပျံ့နှံ့" ကို။ ။ အဆိုပါ #SpreadTheNewz NAB Giveaway သစ်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းအလင်းအကြောင်းကို tweets သူတစ်ဦးမှပြနေစဉ်အတွင်း Zylight လိမ့်မည်ဆုချီးမြှင့်တဦးတည်း Newz နေ့ရက်တိုင်းစဉ်အတွင်း ...
NAB 2015 မှာတိုက်ရိုက် Interactive မှဘောလုံးအားသုံးသပ်ခြင်းများအတွက် Launchpad ™ Touchscreen ဖြေရှင်းချက်၏နယူးဗားရှင်းပွဲဦးထွက်မှ RCS
Burbank,, CA - လူငယ်ကဏ္ဍအမျိုးသားအသင်း (NAB) Las Vegas မှာ, NV အတွက် Show ကို 2015 မှာ Reality စစ်ဆေးမှုစနစ် (RCS) Launchpad ™, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှများအတွက်အဆင့်မြင့်ဘောလုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရိုးရှင်းစွာကြောင်း၎င်း၏ထုတ်လုပ်မှု-သက်သေအပြန်အလှန် touchscreen ကဖြေရှင်းချက်၏နောက်ဆုံးပေါ်ကြားမှာ Spotlight ပါလိမ့်မယ် ထုတ်လွှင့်။ အဆိုပါဖြန့်ချိဧပြီ 2417-13 ထံမှ Vizrt Booth #SL16 အတွက် NAB မှာခင်းကျင်းပြသဖြစ်ခြင်းနှင့်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ features အသစ်တွေကိုလည်းပါဝင်သည်ပါလိမ့်မယ် ...